Barnaamijka Cilmi-baarista Dalagyada Wadajirka ah (CCRP) wuxuu u shaqeeyaa sidii loo hubin lahaa adduunyo ay dhammaantood heli karaan cunno nafaqo leh oo si joogto ah ay u soo saaraan dadka maxalliga ah. Waxaan tan ku sameynaa iyada oo loo marayo nidaamyada wadajirka ah ee cilmi-baarista iyo wadaagista aqoonta ee xoojinaya awooda beeraleyda yaryar, machadyada cilmi-baarista, iyo ururada horumarinta. Waxaan u qaadaneynaa qaab guud, nidaam bey'adeed ee beeraha, taageerida cilmi baarista iyo iskaashiyo horseeda kordhinta wax soo saarka dalagga, habnololeedka oo hagaagay, nafaqada wanaagsan, iyo sinaanta oo kordhay. Waxaan diirada saareynaa taageeradayada seddex jaaliyadood oo tababar ku leh 10 dal oo ku yaal Andes iyo Afrika.
Wax dheeri ah baro ku saabsan shaqada CCRP.
Barnaamijka Caalamiga ah iyo Deeqaha Deeqaha